09954999910 / 09954999920
Slot Game များ
လူကြီးမင်း၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်မေ့နေလျှင် ကျေးဇူးပြု၍ Customer Service Hotline-09954999910 / 09954999920 သို့ဆက်သွယ်ပေးပါ။
မေးမြန်းလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ(FAQ) တွင် လူကြီးမင်းတို့အတွက် အကောင့်ဖွင့်ပုံ၊ ငွေသွင်းငွေထုတ်ပုံ နှင့် Game ဆိုဒ်များအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးထားပါသည်။
Customer များအနေဖြင့် ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီ၏ 24/7 customer service သို့ ဖုန်းဆက်၍ဖြစ်စေ၊ Viber, Facebook နှင့် email တို့မှဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။customer တစ်ဦးချင်းစီ၏ အချက်အလက်များ လုံခြုံရေးသည် ကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ထိုလုံခြုံရေးစနစ် ဆက်လက်မြင့်တင်ရန် ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီတွင် Agent လိုချင်သော Customer များအတွက် လူကြီးမင်းတို့၏ member များ၏ထိုးကြေး ကော်မရှင်(comission)ကို အပြည့်အဝလူကြီးမင်းတို့ထံလစဉ်လတိုင်းတွက်ပေးပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့၏ ပုံမှန်ဝင်ငွေအပြင် ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူ လက်တွဲ၍ အပိုဝင်ငွေများကို လွယ်ကူရိုးရှင်းစွာရယူလိုက်ပါ။
နိုင်ငံတကာအရည်အသွေးမှီ နည်းပညာ ၊ ချောမောလှပသော ဖဲဝေမိန်းကလေးများနှင့် ရင်ခုန်စိတ်လုပ်ရှားဖွယ်ကစားနည်းများ(baccarat , dragon-tiger, roulette and Sicbo) တို့ပေါင်းစပ်၍ လူကြီးမင်းတို့၏ ကာစီနိုအပန်းဖြေမှုကို စိတ်ကျေနပ်အောင်စွမ်းဆောင်ပေးပါမည်။ Live Show ကာစီနိုဖြစ်တဲ့အတွက်လူကြီးမင်းတို့ တကယ့်ကာစီနိုဝိုင်းတွင်ကစားနေသကဲ့သို့ခံစားရပါမည်။
နာမည်ကြီး Premier League, La Liga , Series A, Bundesliga , Champion League နှင့် နိုင်းတကာခြေစမ်းပွဲများအပါအဝင် လစဉ်လတိုင်း ပွဲပေါင်း (၁၀,၀၀၀) ကျော်ကိုပေါက်ကြေးများဖွင့်လှစ်ပေးပါသည်။
Customer များအနေဖြင့် လူကြီးမင်းတို့ ကစားထားသောပွဲစဉ်များကို Live Show ဖြစ်စေ၊ ပွဲပြီး ၍ဖြစ်စေ ရလဒ်များကို ကျွန်တော်တို့ ဝက်ဆုဒ်တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
တိုက်ရိုက်ကာစီနိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ(Live Casino rules)
ကျွန်တော်တို့ဝက်ဆိုဒ်၏ Live Casino တွင်လောင်းထားသော Credits များသည် တိုက်ရိုက် Live လွင့်ပေးသော ကာစီနိုဝိုင်းများ၏ စည်းကမ်းချက်များကိုသာ အတည်ပြုမည်ဖြစ်သည်။
Customer များအနေဖြင့် အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေး ကစားနည်းနှင့် ငွေပေးငွေယူမှတ်တမ်းများကို ကျွန်တော်တို့ customer service ဖုန်းဆက်(သို့မဟုတ်) ဝက်ဆိုဒ်တွင်ဖော်ပြထားသော ဂိမ်းစနစ်မှ သိရှိနိုင်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့သည် လောင်းကစားအရည်အသွေးမြင့်တင်ရန်နှင့် မလိုလားအပ်သောပြဿနာများမဖြစ်စေရန် ၁၈နှစ်အောက်လူငယ်များကို ကျွန်တော်တို့ ဝက်ဆိုဒ်တွင်အပန်းဖြေခွင့်ပိတ်ပြင်ထားပါသည်။
customer များအနေဖြင့် ကျွန်တော်တို့ဝက်ဆိုဒ်၏ ညာဘက်အပေါ်ထောင့်တွင်ရှိသော "မှတ်တမ်းတင်ရန်" ခလုတ်ကိုနှိပ်၍ မိနစ်အနည်းအတွင်း လူကြီးမင်း၏ ကိုယ်ပိုင်အကောင့်ကို ရယူနိုင်ပါသည်။
customer များအနေဖြင့် ကျွန်တော်တို့ဝက်ဆိုဒ်တွင်ဖော်ပြထားသောစနစ်မှဖြစ်စေ၊ customer service သို့ဖုန်းဆက်၍ဖြစ်စေ ငွေသွင်း၊ငွေထုတ်ကို လွယ်ကူလျင်မြန်စွာပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Copyright © 2018 www.myanbet.com Corporation, All Rights Reserved.
ကျွန်တော်တို့အကြောင်း လိုင်စင် ဓာတ်ပုံ ငွေသွင်းရန် အကူအညီ ငွေထုတ်ရန် အကူအညီ
ကျွန်တော်တို့သည် ဖီလစ်ပိုင်နိုင်ငံအခြေစိုက် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး Cagayan Special Economic Zone and Free Port (CSEZFP) of CGA via the North Cagayan Gaming and Amusement Corporation (NCGAC) Legal gambling license ကိုတရားဝင်ကိုင်ထားသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ၂၀၁၅ မှစတင်ကာ အွန်းလိုင်း ကာစီနို နှင့် အားကစားပွဲများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးပြီး ဆက်လက်၍ အဆင့်မြင့် ဂိမ်းအမျိုးပေါင်းများစွာ ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန် ကြိုးစားနေပါသည်။ မြန်မာပြည်ဈေးကွက်သို့ အဆင့်မြင့် ကာစီနို ၊ ဘောလုံးပွဲများ နှင့် အခြားဂိမ်းများကို တစ်နေရာထဲတွင် အလွယ်တကူ ကစားနိုင်အောင်ဝန်ဆောင် မှုပေးသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဝက်ဆိုဒ်ကို လွယ်ကူရိုးရှင်းစွာ သေချာ တည်ဆောက်ထားသောကြောင့် Application များ download ဆွဲစရာမလိုပဲ ဖုန်းတစ်လုံးရှိရုံဖြင့် ကစားနိုင်ပါသည်။
မျှတမှု နှင့် တိကျမှန်ကန်ခြင်း
ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီသည် (online gaming) ဝက်ဆိုဒ်ဖြစ်ပြီး GEOTRUST international certificates (အွန်လိုင်းဂိမ်းများတွင်တရားမျှတမှုရှိမရှိစစ်သောလက်မှတ်) ရထားသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကစားသမားတစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းကို မျှမျှတတ နှင့် တိကျမှန်ကန်စွာအလျှော်အစားပြုလုပ်ပေးမည်ဟု ကတိပေးပါသည်။ ထို့အပြင် the Philippine government First Cagayan leisure and Resort Corporation မှ ကျွန်တော်တို့ ဝက်ဆိုဒ်၏ ဂိမ်းများကို မျှတမှုရှိစေရန် စောင့်ကြည့်ပေးထားပါသည်။
customer တစ်ဦးချင်းစီ၏ အချက်အလက်များ လုံခြုံရေးသည် ကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။လူကြီးမင်းတို့၏ အချက်အလက်များကို ဖီလစ်ပိုင်နိုင်ငံရှိ Server တွင်လုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းထားပါသည်။ထိုလုံခြုံရေးစနစ် ဆက်လက်မြင့်တင်ရန် ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမည်ဖြစ်သည်။
ရုံးချိန်အနက် ၁၀ နာရီ မှ ည ၁၂ နာရီအထိ တစ်ပတ်လုံးပိတ်ရက်မရှိ ငွေသွင်းထုတ်လုပ်လို့ရပါသည်။ ငွေသွင်းထုတ်ကိုလည်း ၁၀မိနစ်အတွင်း မြန်ဆန်စွာလုပ်နိုင်အောင် ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများကိုခန့်ထားပါသည်။
ကုမ္ပဏီမှ ဝန်ထမ်းများကို ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်စေရန်အထူးဂရုပြုလေ့ကျင့်ပေးထားပြီး ငွေသွင်းငွေထုတ်မြန်ဆန်ရန် နှင့် ဝက်ဆိုဒ်အကြောင်းအရာများကိုလေ့ကျင့်ပေးထားပါသည်။
ကျွန်တော်တို့၏ ဂိမ်းဆိုဒ်များအားလုံးသည် www.firstcagayan.com(the First Cagayan leisure and Resort Corporation of the Kagyan Economic Area of the Philippines) မှတရားဝင်လိုင်စင်ရထားသောကြောင့် တိကျမှန်ကန်မှုရှိကြောင်း အာမခံပါသည်။
business license(လုပ်ငန်းသုံး လိုင်စင်)
Myanbet entertainment website is under the TIANYUN WORLDWIDE COMPANY LTD., Owned by the Philippines Cagayan (Cagayan) licensed and under the supervision of the duly authorized to provide you withasecure, legal online gambling services. From casinos, poker, sports betting to table games, you can enjoyavariety of exciting game products.
လူကြီးမင်းတို့အနေ ဖြင့် company သို့အောက်ပါနည်းလမ်းများဖြင့်ငွေသွင်းနိုင်ပါသည်။
ကျေးဇူးပြုပြီး ကျွန်တော်တို့၏ customer service တို့ဆက်သွယ်၍ ဘဏ်အကောင့်နံပါတ်တောင်းပါ။ထို့အကောင့်နံပါတ်သို့ ဘဏ်မှလူကြီးမင်းသွင်းလိုသောငွေအမောက်ကိုဘဏ်မှတစ်ဆင့်လွှဲလိုက်ပါ။ငွေလွှဲပြီးကြောင်း ချန်လန်ကို ဓာတ်ပုံရိုက်၍ customer service သို့ viber,messager မှပို့ပေးပါ။ငွေလွှဲပြီးလျှင် လူကြီးမင်း၏ အကောင့်ထဲ၌ ညာဘက်အပေါ်ရှိ အကောင့်အချက်အလက်များ သို့ဝင်၍ ငွေသွင်းရန် နေရာတွင် "ဘဏ်မှလွှဲမည်" ကိုရွေးပြီး သွင်းထားသောငွေအမောက်ကိုဖြည့်၍ အတည်ပြုမည်ကိုနှိပ်ပေးပါ။ company အကောင့်ထဲ ငွေဝင်သွားသည်နှင့်တပြိုင်နက် လူကြီးမင်းအကောင့်သို့ ငွေဝင်လာပါလိမ့်မည်။(မှတ်ချက်။ ။ငွေသွင်းရန်ကြာချိန်သည် ဘဏ်မှလွှဲမည့်အချိန်ပေါ် မူတည်ပါသည်။)
ကျေးဇူးပြုပြီး ကျွန်တော်တို့၏ customer service တို့ဆက်သွယ်၍ ဘဏ်အကောင့်နံပါတ်တောင်းပါ။ထို့အကောင့်နံပါတ်သို့ ဘဏ်မှလူကြီးမင်းသွင်းလိုသောငွေအမောက်ကို mobile banking မှလွှဲလိုက်ပါ။ငွေလွှဲပြီးကြောင်းကို လူကြီးမင်းတို့ ဖုန်းတွင် screenshot ရိုက်၍ customer service သို့ viber,messager မှပို့ပေးပါ။ငွေလွှဲပြီးလျှင် လူကြီးမင်း၏ အကောင့်ထဲ၌ ညာဘက်အပေါ်ရှိ အကောင့်အချက်အလက်များ သို့ဝင်၍ ငွေသွင်းရန် နေရာတွင် ATM (သို့မဟုတ်) Mobile Banking ဖြင့်လွှဲမည်ကိုရွေးပြီး သွင်းထားသောငွေအမောက်ကိုဖြည့်၍ အတည်ပြုမည်ကိုနှိပ်ပေးပါ။
၁.လူကြီးမင်းတို့အနေဖြင့် ငွေမသွင်းမည် Company တွင် လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များကို မှတ်တမ်းအရင်တင်ရပါမည်။
၂.လူကြီးမင်းသွင်းလိုက်သောငွေသည် လူကြီးမင်းအကောင့်၏ ပိုက်ဆံအိတ်တွင် ဝင်နေမည်ဖြစ်သည်။ထို (ပိုက်ဆံအိတ်နှင့် ငွေလွှဲခြင်း)မှတစ်ဆင့်လူကြီးမင်း ကစားလိုသောဆိုဒ်သို့စိတ်တိုင်းကျလွှဲပြောင်းကစားနိုင်ပါသည်။
၃. ပထမတစ်ကြိမ်ကို အနည်းဆုံး ၃၀၀၀၀ ကျပ်စသွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ ပထမတစ်ကြိမ်သွင်းပြီးပါက နောက်ပိုင်းတွင်အနည်းဆုံး ၁ သောင်းသွင်းနိုင်ပါသည်။ (လူကြီးမင်းတို့ ကျွန်တော်တို့ထံငွေမှားလွှဲမိပါက မှားလွှဲထားသော ငွေအမောက် ကို ScreenShot ရိုက်၍ Customer Service သို့ပို့ပေးပြီးပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။)
၁.လူကြီးမင်း၏အကောင့်ထဲကိုဝင်၍ "အကောင့်အချက်အလက်များ" ကိုနှိပ်ပါ။
၂.ငွေမထုတ်မှီ လူကြီးမင်း၏ ဘဏ်အကောင့်နံပါတ်၊ နာမည် နှင့် ဘဏ်အမျိုးအစားကို "လုံခြုံရေးအချက်အလက်" နေရာတွင် သေချာစစ်ဆေးပေးပါ။(မှားယွင်းမှုရှိပါက Customer Service သို့ဆက်သွယ်ပေးပါ)
၃.ဘဏ်အချက်အလက်မှန်ကန်လျှင် ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုအောက်ရှိ "ငွေထုတ်ရန်" ကိုနှိပ်ပါ။
၄.ထို့နောက် ထုတ်မည့်ငွေပမာဏ(အနည်းဆုံး ၁၀,၀၀၀ ကျပ်) ဖြည့်ပြီးလူကြီးမင်း၏ ဂိမ်းအကောင့် လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကို ရိုက်ထည့်ပေးပါ။
၅."ငွေလွှဲမှတ်တမ်း" နေရာတွင် လူကြီးမင်း၏ ပိုက်ဆံအိတ်မှ ကစားရန်ဆိုဒ်သို့ ငွေလွှဲပြောင်းထားသော မှတ်တမ်းများဖော်ပြထားပါသည်။